The Art of War in the Kingdom of Queen Nzinga (Ndongo): Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke zuru oke, akwụkwọ ndị e dere ede na-enye anyị ozi bara uru banyere nkà nke agha na-ebute tupu ebido West Africa. ... (Na)
Site na: KongoLisolona: Disemba 26, 2018 06: 35 Enweghị asịsa
Na mkparita uka banyere agha nke ndi mmadu n'ozuzu ha, Afrika bu onye ikwu ogbenye. Enweghi ike inwe ezi ihe jikota ya na enweghi ihe omuma nke akwukwo ...	GỤKWUO
Akụkọ ihe mere eme nke Kongo: na Kongo dia Kati = etiti Kongo enwere akụkọ ifo nke kwuru banyere otu n'ime ndị dike a dị nsọ, n'aha Kinshasa… Ndị toro na Kongo dia Kati, ọkachasị na Kinshasa, maara akụkọ a nke ama ama. ibu
Site na: KongoLisolona: March 21, 2018 11: 49 Enweghị asịsa
Ebido na aha "Kongo", biko "Kongo" ya na "K" mana ọ bụghị na "C". Nke mbu, ebo anyi, sitere na Chineke nke puru ime ihe nile nihi na o nochiri onu ogugu ya ...	GỤKWUO
Akụkọ Kongo: ndị ojii "KONGO" sitere na chi dị ike nke nwere aha ndị a: Omakongo, Okongo, Akongo do Kongo Kalunga ... Mgbe nna nna anyị hà na-achọ ala nkwa ahụ bụ "Kongo dia Ntote" site na Ethiopia, Nzambi'a Kongo Kalunga si nna nna anyị hà:
Site na: KongoLisolona: March 20, 2018 04: 27 Enweghị asịsa
Ọ bụ site na ịhụnanya m, m kere mmadụ. Unu, ndị m hụrụ n'anya, ndị na-aza aha m; ịkpọku ịhụnanya m; ọ na-ekwu na ịkpọ ya "ne kongo kalunga" (chi ubi) hụrụ n'anya na ...	GỤKWUO